साताको ब्लगर: प्रेमप्रसाद पौडेल - MeroReport
साताको ब्लगर: प्रेमप्रसाद पौडेल
जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्त्याउने समस्याबारे बहस विश्वमा नै चर्किँदै गएको छ । हिमालको हिउँ पग्लिने, तालहरु सुक्ने र जलाधारमा पनि ह्रास आउने क्रम बढ्दै गैरहेको छ । वातावरण जोगाएर लामो
समय बाँच्नुपर्छ भनेर वातावरणको क्षेत्रमा ब्लगिङ गर्दै आइरहेका छन् ब्लगर प्रेमप्रसाद पौडेल । उनले यसै विषयमा पत्रिकामा लेखहरु पनि लेख्ने गरेका छन ।
ब्लगर पौडेलले आफ्नो ब्लग 'वातावरण प्रतिकूलले बनाएको मरुभूमिको यात्री' मा पर्यटन, स्वास्थ्य, संस्कृति, व्यक्तित्व, आदी थुप्रै विषयवस्तु समावेश गरेका छन् । धैबुङ, रसुवा घर भएका प्रेमप्रसाद पौडेल हाल नयाँबजार काठमाडौंमा बस्छन् । उनको बुवा, आमा, हजुरआमा, श्रीमती, १ छोरा र १ छोरीसहितको परिवार भने रसुवामा नै बसोवास गर्दै आइरहेको छ ।
आफ्नो ब्लगमा धेरै जसो रसुवाको विषयवस्तु समावेश गर्ने पौडेललाई हामीले साताको ब्लगरको रुपमा प्रस्तुत गरेका छौँ । ब्लगिङ, सामाजिक सञ्जाल र वातावरयका विषयसँग सम्बन्धित रहेर उनीसँग गरिएको कुराकानी:
तपाईंको पेशाको बारेमा केहि बताइदिनुस न ?
हाल म ठमेलस्थित ट्राभल टेक्नोलोजी नेपालमा म्यानेजरको रूपमा काम गर्छु । ट्राभल टेक्नोलोजी नेपाल एउटा अनलाइन टेक्नोलोजी कम्पनी हो जसले नेपालका होटल तथा ट्राभल एजेन्सीका वस्तु र सेवासम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन, बजारीकरण तथा विक्री सेवा प्रदान गर्दछ । पहिला म रसुवा खबर साप्ताहिकमा सह -सम्पादकको रुपमा काम गर्थेँ । अहिले www.rasuwakhabar.com अनलाईनमा पनि काम गरिरहेको छु ।
ब्लगिङ कसरी गर्न थाल्नु भयो ?
मलाई ब्लगको बारेमा थाहा थिएन । एकचोटि साइबरमा जाँदा एउटा ब्राउजरमा create your Blog भन्ने रहेछ । यो के रहेछ भनेर हेरेँ अनि आफ्नो ब्लग बनाएँ र ब्लगमा लेख्न थालेँ । त्यो ब्लगको पासवर्ड बिर्सेर चलाउन सकिनँ । पछि फेरी नयाँ ब्लग बनाएर ब्लगिङ थालेँ ।
मसँग ब्लग डोमेन धेरै छ । मैले आफ्नो जिल्ला रसुवाको बारेमा एथेष्ट जानकारीहरु अनलाईनमार्फत दिनुपर्छ र ब्लगिङले पनि धेरै कुरा गर्न सक्छ भनेर रसुवाको हरेक क्षेत्रको लागि मैले ब्लगहरु बनाएर राखेको छु । त्यसलाई क्रमश राम्रो बनाउँदैछु । www.premprasadpaudel.blogspot.com भन्ने छ । म अहिले त्यसैबाट ब्लगिङ गरिरहेको छु ।
धेरै जसो रसुवाकै कुरा लेख्ने गरेको छु । र पछील्लो समयमा मैले राजधानीका कुरालाई पनि राख्ने गरेको छु ।
आफ्नो कुरा आफ्नै तरिकाले व्यक्त गर्न पाइन्छ । आफुले चाहे जस्तो कुरा राख्न सकिन्छ । कुनै पनि सफ्टवेयर किन्नु नपर्ने कारणले मैले ब्लगिङ रोजेको हुँ ।
कस्तो प्रतिकिया पाउने गर्नु भएको छ ?
ब्लगबाट नै मैले प्रतिकिया त पाइरहेको छैन । फोनमार्फत प्रतिकिया दिने गर्नुहुन्छ । यो राम्रो लेख्नु भएको रहेछ । मलाई यो विषयवस्तु खड्किरहेको थियो तपाईंले लेख्नु भयो भन्ने गर्नु हुन्छ । र मैले फेसबुकमा शेयर गर्दा फेसबुक बाटै प्रतिकिया आउने गरेको छ ।
कतीको समय दिने गर्नु हुन्छ ?
म प्रायः अनलाईनमै काम गर्ने भएकोले एक-दुइ घन्टा कामको चाप हेरेर र प्रायः बेलुका चलाउँछु ।
पछिल्लो पटक के लेख्नुभयो ब्लगमा ?
पछिल्लो पटक रसुवाको विकासको सूचक : जलविद्युत, पर्यटन र रसुवागढी नाका लेखेको थिएँ । यसमा मैले रसुवा जिल्ला राजधानीबाट नजिकै छ, मानिसहरुमा चेतना र विकास निर्माणसँगै हामी अब सधै दुर्गम हौँ भनीरहनु पर्दैन भन्ने कुरा लेखेको छु । मैले चिलिमे जलबिद्युत केन्द्रको पनि वर्णन गरेको छु जुन रसुवाको मात्रै नभएर देशकै नमुना उत्पादन भएको छ र अरु बिभिन्न कुराको वर्णन गरेको छु ।
के ब्लगिङमा आचार - संहिताको आवश्यकता छ ?
जुनसुकै काम गर्नको लागि निश्चित नीति-नियमको आवश्यकता हुन्छ । मन लाग्यो भन्दैमा अरुलाई आघात पर्ने खालको अथवा आरोप लगाउने खालको सुचना पोस्ट गर्नु हुँदैन ।
ब्लगिङ कतिको महत्वपूर्ण छ ?
कसैले केहि लेखेर मिडियामा पहुँच पुगेको छैन भने ब्लगमार्फत पुर्‍याउन सक्छ । पत्रिकामा छापिएका कुरा हराएर जान सक्छ तर ब्लगमा लेखेका कुरा रहिरहन्छ ।
रसुवामा ईन्टरनेट प्रयोगको अवस्था कस्तो छ ?
तीन वर्षअघिसम्म ईन्टरनेटको प्रयोग त्यति थिएन । हामी रसुवाबाट नै दुःखजिलोको साथ चलाउँथ्यौँ । कहिलेकाही सारै पीर पनि लाग्थ्यो, ईन्टरनेटको अवस्था देखेर । तर सदरमुकाम धुन्चे र कालिकास्थान बजारमा केन्द्रीत इन्टरनेट आज विभिन्न डिभाइसको प्रयोगबाट घरघरमा चलिरहेको छ । प्रत्येकका मोबाइलमा फेसबुक चल्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले रसुवामा सेवा दिन खोजिरहेका छन् भन्ने पनि सुनेको छु ।
रसुवाको युवापुस्ता विस्तारै इन्टरनेटको प्रयोगमा अगाडि बढिरहेका छन् । मलाई आशा छ छिट्टै विकट बस्ती यार्सा, हाकु जस्ता गाविसमा पनि विजुलीको पहुँच पुग्नेछ, इन्टरनेट सेवा पुग्नेछ र हामी त्यहाँ पुग्दा त्यहीँबाट ब्लगिङ गरी त्यहाँको कुराहरू प्रवाह गर्न सक्नेछौं । सबैको चाहना र विश्वास भएमा यो सम्भव छ ।
वातावरण सम्बन्धी कतिको चेतना छ आम मानिसमा ?
वातावरण विना मानिसको जीवन अकल्पनीय छ भनेर सबै खालका मानिसले बुझ्न सकेका छैनन् । समाजका अगुवा भन्ने वा बुझेका मानिसले पनि बुझ पचाएका छन् । हाम्रा कारण वातावरण बिग्रेको हो भनेर बुझ्न अति नै आवश्यक छ । वातावरणका विषयमा चेतना जस्तो भए पनि वातावरण प्रदुषण हुने खालका काम हामी सबैले जानेर वा बाध्यताले गरिराखेका छौं । मेरो ब्लगका विभिन्न पोस्टहरूमा मैले यस्ता विषयवस्तुलाई उठाएको छु ।
वातावरण सम्बन्धी सवाल उठाउन ब्लगले कतिको प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ ?
ब्लगले निश्चय नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । वातावरण प्रदुषण कसरी हुन्छ र त्यसका समाधानका सरल उपायहरू के हुन् भन्ने खालका चेतना प्रवाह, त्यस सम्बन्धि फोटो तथा भिडियो राखेर वा वातावरण प्रदुषणका कारण र संरक्षणका सवाल विषयमा आन्दोलनका रूपमा ब्लगिङ गरी वातावरण संरक्षणका लागि ब्लगिङको प्रभावकारिता देखाउन सकिन्छ ।
यो सम्भव पनि छ किनकि आम मानिसका लागि ब्लग सरल र सुलभ प्रविधि हो । ग्रामीण तहसम्म पनि आजभोलि इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गएका कारण जुनसुकै कुनाबाट पनि ब्लगिङ गर्न सकिन्छ । होस्टिङ, नवीकरण आदि केहीको पनि आवश्यकता नपर्ने भएकोले यो सबैका लागि सरल उपाय हुनसक्छ ।
मेरोरिपोर्ट कस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
मेरो रिपोर्टमा म भर्खरै प्रवेश गरेको हुँ । जुन दिन म प्रवेश गरें, त्यस दिनदेखि नै मैले यसको प्रभावकारीता वा मेरोरिपोर्टको अभियानलाई बुझ्न सकेको छु जस्तो लाग्छ । नेपालका आम व्लगर वा नागरिक पत्रकारहरूको लागि यो एउटा अभ्यासको थलो बन्नेछ । जसले अभ्यास गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि सच्चिँदै, माझिँदै, परिस्कृत हुँदै जिम्मेवार ब्लगिङ गर्ने तथा देखेका, भोगेका कुरालाई उतार्ने माध्यम मेरोरिपोर्ट बन्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
केहि सुझाव छन मेरोरिपोर्टको लागि?
म मेरोरिपोर्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरो अनुभव राख्ने मौका दिनु भएकोमा । सुझावमा मेरो रिपोर्टमा सदस्य बन्नेको फोटो तथा विस्तृत विवरण राखेपछि मात्र तपाइँहरूले सदस्य कन्र्फम गर्नु भयो भने राम्रो हुन्छ । यसो गरेन भने स्पाम आउन सक्छ । पहिला-पहिला इमेलमा यस्तो धेरै आउँथ्यो, कसैले रिप्लाई गर्यो भने विभिन्न प्रभोलन देखाएर पैसा माग्ने काम गर्छन् । यस्तालाई प्रवेश गर्न रोक्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
पागलबस्ती (कुमार फुयाँल)
Comment by Pagal Basti on July 2, 2012 at 7:47pm
प्रेम पौडंल ज्युलाइ बधाइ। स्विकार होस
Comment by प्रेम पौडेल (मरूभूमिको यात्री) on June 28, 2012 at 10:56pm
Many thanks for the text for capturing all the words. I am really happy for that, Mero Report, Net providing meachance to share my knowledge, Actually this is my first experience .
Comment by Sharmila Dulal on June 27, 2012 at 6:38pm
Keep going....and keep it up.
Comment by Amuna Chapagain on June 27, 2012 at 2:57pm
Comment by Ajeeta Sigdel on June 27, 2012 at 2:53pm